Manyuchi Oronga Kudzivirira Bhande Rake muZimbabwe?
Vatungamiri vemutambi wetsiva Charles Manyuchi veOriental Boxing Promotions vari kuda kuti mutambi uyu adzvirire bhande rake reWorld Boxing Council resirihva muZimbabwe asi paine chisungo.
Manyuchi uyo ave pachinhanho chechipfumbamwe muhurongwa hwevatambi veWorld Boxing Council muhuremu hwe welterweight haasati amborwira munyika make kubvira atanga kurwa tsiva yepamusoro muna 2009, mitambo yake yepamusha yese achirwira ari muZambia.
Asi maneja wake kuZambia, VaChris Malunga veOriental Boxing Promotions, vanoti vataura nevakuru vezvemitambo muZimbabwe kuti Manyuchi arwire muZimbabwe apo achange achidzivirira kekutanga bhande rake irokatora svondo rapera.
Manyuchi ane chibvumirano chemakore mashanu neveOriental Boxing Promotions chekurwira mitambo yake ari muZambia asi VaMalunga vanoti mushure mehurukuro negurukota rezvemitambo muZimbabwe, VaMakhosni Hlongwane, varatidza kufara zvikuru nehurongwa hutsva uhu.
Asi VaMalunga vabuda pachena kuti izvi zvinokwanisika kuitika chete kana vanhu vemuZimbabwe vakwanisa kuunganidza mari inoita iyo zviuru zana nemakumi mashanu izvo zviri kudikanwa kuti mutambo uyu uiitwe.
Asi musimudziri wetsiva anozivikanwa zvikuru, VaStalin Mau Mau, vanoti mari iyi haikwanisike kuwanikwa vachitarisa kuoma kwezvehupfumi muZimbabwe, vachiwedzera ivo kuti kana chiri icho chisungo chacho, havasi kuona mutambo uyu uchiitirwa muZimbabwe.
Iye Manyuchi pachake haana chivimbo chekuti pane munhu kana kambani inokwanisa kubuditsa mari yakadai achiti iye kunyange hake anga achida kukunda zvibhakera pamberi pehama dzake, aya anongove maroto chete anofanira kuperera mumagumbeze.
Kuti Charles Manyuchi abve muZimbabwe achinorwira kuZambia, aive ashaya wezvemabhizimisi kana kambani yaiisa mari kuti akwanise kurwa izvo ari kuitirwa neOriental Boxing Promotions.
Aimbove mutambi wetsiva, Arifonso Zvenyika, uyo akatora mukombe weCommonwealth muna 1998 anotenderanawo naVaMau Mau achiwedzera iye kuti chaita kuti tsiva idzikire pasi munyika muno inyaya dzekushaikwa kwemari.
Pamakore gumi adarika, Zimbabwe haina kana kumboita mutambo mumwechete wetsiva unosanganisa mutambi wekunze kwenyika, kozotiwo mitambo yevemuno vari vega hakusisina.
VaMau Mau vanoti makambani mashoma asara achiri kukwanisa kubuditsa mari mumitambo vasaite zvekusarudza vachitarisawo kudivi retsiva.
Sachigaro weZimbabwe Boxing Board of Control, VaPaul Nenjerama, havana kubatika kuti tinzwe kuti sangano ravo rakamira papi nenyaya yemutambo waManyuchi.
Pamutemo, Manyuchi anomanikidzwa kudzivirira bhande rake kwapera mwedzi mitatu.
Manyuchi ave pachinhanho chechipfumbamwe pasi rose mushure mekudambura Dimity Mikaylenko wekuRussia svondo rapera apo vairwira bhande resirivha iro rakasiiwa naAmir Khan wekuBritain.
Vaviri ava vasati varwa, Manyuchi aive pachinzvimbo chegumi neina pasi rose.
VaMalunga vanoti chinangwa chavo gore rino, ndechekurwa neDanny Garcia wekuUSA uyo ane bhande regoridhe rehuremu uhu.